Ingabe kungenzeka yokulawula impisi empilweni yangempela?
Mayelana kanjani izilwane zasendle iba umngane yabantu emihle, eziningi movie wathwebula. Thina ukubukela nomona namaqhawe abangakwazi kalula yokuthola ulimi olulodwa emgodini wamabhubesi, izingulule nezimpisi. umhlali Russian Yiqiniso, kulula ukuhlangabezana impisi kuka nengwe, ngakho sanquma ukuba sicabange ukuthi singakwazi yini lwabo. lokhu nomzingeli omangalisayo. Ingabe kungenzeka yokulawula impisi empilweni yangempela, indlela yokukwenza - zonke kulesi sihloko.
Uma necebo umbono ukuthatha ekhaya njengoba impisi isilwane, kufanele wazi ukuthi lokhu isilwane akuyona inja, nakuba zofuzo ezihlobene. Ingabe kungenzeka yokulawula impisi njengoba poodle? Cha, ungenawo baphume kahle, kodwa yonke into e ubuntu bakhe.
Ngo impisi iphakethe wokwehlayo ebusa, lapho umholi, kodwa isikhathi ngasinye esizukulwaneni esisha uzama ukuze afakazele ukuphakama namandla abo. Lapho impisi wabona noma lapho ngizizwa ukuthamba nemvelo - phansi abakhwabanisi! Amandla ludlulele isidladla yayo okuzingela.
Yini okufanele ube ngumnikazi impisi?
Into ebaluleke kakhulu - impisi akasoze balukhulume. Kuyoba kuphela kube umholi. Hhayi umngane, umzalwane wakhe, kodwa aqinile futhi siphakeme kunabo bonke abanye kuyo yonke umholi wayo.
Uma namanje uhlose ukuthatha kuye ngokuqukethwe nomzingeli enjalo, bese uzilungiselele njalo hlalani nivulé amehlo futhi izimpiko kanye Amazinyo ngomumo! Umholi (impi) impisi kumele abe umlingisi eqinile, imizwa ensimbi, kubalulekile futhi muntu. Ngemva ukwanda iminyaka emibili impisi nomzingeli uhlale ukuze afakazele ukuphakama yabo.
Ingabe kungenzeka yokulawula impisi, uma abanalo izakhiwo ngenhla? Cha, cishe yena uzoba yokulawula noma njengomuntu omdala, zama ukunambitheka yesandla sakho.
Izimpisi izingane kwelinye iphakethe
Nge ukubukeka umndeni impisi zokuphila kwakho kuyoba okuhluke ngokuphelele. Uma unezingane ezincane, kungcono ukuba ukhethe impisi. Kwabesifazane athuthukile isazela kwabakhulelwe, ngakho-ke ngeke ilimaze futhi ngeke ubuhlungu ingane, kuyoba umngane kuhle kuye. Iduna futhi uqala ukuba "isitimela" ingane njengoba impisi abangalayisenswa sokulimaza sina.
Sikhula, timphisi ziba nolaka (ezimweni eziningi), ngakho ucabangisise enhlalakahleni yokuphila kwakhe "iphakethe" ngaphambi ngihola umfelokazi ukuba nomzingeli.
Yokulawula i impisi omdala
Uma uhlala eduze nehlathi lapho izimpisi noma une cottage lapho, khona-ke kungenzeka ukuthi izilwane ezidla ezinye angaya nawe. Bayoba ukuheha yokushisa iphunga ukudla, ikakhulukazi ebusika. Abantu abaningi bakhetha okwethusa inkalankala izilwane eziyingozi insimu yalo, kunokuba ukuthola oxhumene nabo. Ingabe kungenzeka yokulawula impisi, uma engumuntu omdala futhi zasendle?
Lokhu akusebenzi, awusoze ukwazi ukuphulula naye. Kodwa nabo kungenzeka ukwenza ukuthula, ngaphandle kokwesaba ukungena insimu yalo.
Ngesikhathi benomhlangano nezithunywa impisi kunoma isiphi isimo ungagijimi futhi ungazenzi noma yiziphi ukunyakaza kungazelelwe. Ungalahli likhiphe ephaketheni lakho noma esikhwameni ukudla njengoba impisi kuzokusa ngokwabo ukuze zithole ukudla. Kungcono, kancane ekumlandeleni eya ohlangothini, ukubeka ucezu lwesinkwa noma amasosishi wasekela kude, buthule ushiye. Musa ufulathele nomzingeli! Ngeke nesineke, ukuze ahlale kuchumana ngemehlo.
Isexwayiso! Ukuya ehlathini, uma wazi ukuthi kukhona nezimpisi siphile, kudingeka baphathe isibhamu noma ezinye izibhamu. Ezimweni eziningi, ngeke impisi uthola emehlweni indoda, futhi ungathanda ukuba bacashe. Kodwa izilwane onobudlova baye bafune ukuhlangabezana nomuntu.
Uma "lucky" ukuhlangana impisi zasendle, futhi ngenkathi akazanga ubudlova, awukwazi ukhathazeke ukuphila kwakho esikhathini esizayo. Lesi silo ngeke simthinte, kodwa ngeke ngivume ukuba yena. Ungakwazi nigcine ngokuhlalisana ngokuthula endaweni.
Amawundlu - kukhona izingane esifanayo, dogs imidlwane. Ngakho kungenzeka yokulawula impisi kusukela ebuntwaneni? Lokhu kuyoba inkiyankiya yenkinga, kodwa inawo wonke amathuba.
Uma wawela ezandleni we cub ngalesosikhathi phathelana ngaye umama nobaba, umngane nomfowabo, indlela kuphela bakwethembe yakhe schenyachestva. Chitha isikhathi esiningi inkampani yakhe, futhi noma kunjalo, musa tie it, ungafaki ku neketanga.
Uma unquma ukwenza impisi, musa ngisho uzame njengoba inja labaqaphi. Ziyakwazi beshesha kakhulu, ngakho kungakhathaliseki ukuthi esiphikeni is some, impisi uthola indlela yokuphepha. Bese ukuphila kwakho nokuphila kwabathandekayo bakho kuyoba engozini.
Wolf ngeke endlini oqeqeshwe njengomvocavoci inja, futhi akukho Canine akakwazi ukubhekana lo msebenzi. Ngakho nje umlethe phezulu, ondle futhi ukhule. Lezi zilwane athande ukudlala, futhi umdlalo angeke acabangele amandla abo - ukuluma le scruff (indawo abawuthandayo ukubamba inyamazane), noma ukuluma esandleni sakhe. Zilungiselele ukuzijabulisa okunjalo, kungcono in the pet igazi, amsindise imikhuba enjalo ayinakwenzeka.
Indlela yokulawula impisi ekhaya?
Uma uhlala endlini, ungacabangi ekuqaleni impisi. Muhle isilo sasendle, yize wena uzobona yokulawula kusukela ebuntwaneni. Izimpisi badinga eningi inkululeko, akusiyo isilwane sakho, usanda ilungu imihlambi yenu, kanye nenkululeko akudingayo.
Ezizimele kungaba umqondo omuhle ukwakha yezinyoni, kodwa kufanele kube phezulu, okungcono nge ophahleni. Izimpisi ungavele weqe ngaphezu kodonga imitha emithathu.
Ngo nje kwamahora ambalwa nomzingeli ababengase bakuthole yezinyoni, umane ngokwenza emhubheni. Ngakho indawo isilwane zasebusuku okungenasidingo kumele kwagcizelela ukhonkolo. Yiqiniso, uma bakhathazekile omakhelwane, lapho umuntu omdala ngisho impisi domesticated ungaqala ukuzingela.
Indawo ebiyelwe kufanele ibe yindawo lapho impisi uzakulala - okungukuthi lalo emphandwini walo, futhi akukho ndawo yokuhlala unomphela. Ukuze nomzingeli uzizwa ukhululekile, makangilandele ugijime, kube nawe ku i nokuwumisa alinganayo ngokuya inkululeko. Uma ungaphenduki kuyokunikeza isilo, ukuthi uhlale ethukuthele at kuwe, futhi ngeke omunye.
Inketho ekahle ngokugcina impisi iyoba inkululeko yayo egcwele. Kufanele ibe incenye lencane efanayo esiphezulu endaweni yawo engokwemvelo, yemvelo, afakiwe. Impisi bayophila khona, bafika kuwe ukuchitha nge 'umhlambi "yakhe amahora ambalwa futhi udle, bese uyophinde ubalekele" intando. "
Ingabe kungenzeka yokulawula impisi, njengomuntu inja?
Sesiyazi wabhala mayelana lokuthi asikwazi endlini oqeqeshiwe. Impisi akuyona inja. Lezi zilwane - okuphambene ephelele. Uma impisi wathola ulimi olufanayo, kuyoba abathembekile omuhle kuwe kunamadodana inja, he is a nomvikeli.
Indlela yokulawula impisi kangangokuthi wayengasaboni kobungane nje? Lokhu ngeke ukwazi ukwenqaba. Konke kuncike ebuhlotsheni benu. Abagcini kufanele uthanda impisi, kodwa wena. Uma ungenalo sibonise nenhlonipho ubudlova umhlaseli, kodwa hhayi ukuba buthakathaka, kungenzeka ukuba sifinyelele ukuqonda ngokugcwele mutual.
Nge impisi udinga ukuba isikhathi esiningi sindawonye kuka nge inja ke amathuba empumelelo e lwabo. ukwanda. Izimpisi like lapho ekhuluma nabo, ngaphezulu gona akhe, khona-ke imikhuba yakhe okuzingela ngeke usongo wena nomndeni wakho.
Amandla impisi ekhaya
Indlela yokulawula impisi empilweni yangempela, manje uyazi. Umbuzo uyasala, lokho ukondla nomzingeli? Kunjalo, kuba nomzingeli, futhi kwakudingeka inyama.
Wolf inja ukudla ngeke adle, futhi uma accustom ukuba ukudla okunjalo kusukela ebuntwaneni, khona-ke kamuva iyangena lonke bunch of izifo isilwane.
Ngiseyingane, impisi sidla ubisi, okusanhlamvu, inkukhu noma yengulube inyama, emihle futhi uzobe amuncwa yenkomo esithambile. Inyama kufanele kudliwa eluhlaza, izinyane sitholwa ngokuphelele zonke kunesidingo trace izakhi ekukhuleni enempilo.
impisi Adult uyodla kuphela inyama namathambo, ngezinye izikhathi kuyoba iyenzeka ukupheka isobho nge okunamafutha umhluzi.
Ngosuku i umhlaseli omdala Kumelwe uzidle amakhilogremu okungenani eziyisishiyagalombili inyama namathambo. Uma ucabanga ungakwazi ukukhokhela lolu izindleko ke ikhule impisi enempilo futhi emuhle.
Bangaki impisi okuphakelayo ...
Nokho impisi iyisilwane sasendle. Indlela yokulawula impisi njengoba neyokukhuliswa yayo kanye feed - into eyodwa. Kanti kungokunye - ukumgcina eduze kwakhe, khipha ubudlova futhi zonke nemikhuba umhlaseli.
Uma uqala ukuqaphela ukuthi isilwane asuka kuwe, uhluke kakhulu, kufanele ucabange ngekusasa lakhe. Abantu abaningi baye bathambisa impisi, kodwa kamuva sibhekene ubudlova bakhe, uncamela euthanize isilwane noma ikhishwe. Zombili lezi ongakhetha akuzona ezasiza abantu.
Kill isilwane ilula, kodwa cabanga ke, ngoba isidalwa esiphilayo, ukuthi ayengeke azigcine eduze kwakhe, kungabalula umndeni wakhe. Yiphutha lakho kuphela.
Setha khulula? Lokhu kubuye ukubulala. Ukulawula the Beast ngeke ukwazi ukuziphilela, ke zagryzut adutshulwe izihlobo noma abantu abavela lapho impisi ngeke fihla, ngoba akesabi zabantu.
Inketho engcono - ukuthola nursery noma sidalule isilwane e-zoo. Lapho, uyophila eceleni abantu, avikelwe ngokugcwele okuqukethwe kwesokudla.
Ingabe kungenzeka yokulawula impisi? Kungenzeka, kuphela uma ukuzama kanzima kakhulu, uma ungazami ukwenza kube inja, kodwa ukuba aphile nalesi umhlaseli.
Izilwane e-Ukraine: i Uhlolojikelele, izici amaqiniso athakazelisayo
Temperature Everest. Uyini lokushisa phezulu eNtabeni i-Everest?
Umbuzo othakazelisayo: izimpukane ukuluma noma cha?
Exotic, ezimthende, noma Baphi amadube?
Laminated Tinder: izakhiwo kanye isicelo
Utshani quinoa - ukhula noma ikhambi?
Indlela ukushaja ifoni ngaphandle ishaja: izindlela eyeqisayo yesimanje
Tiphawulo Isihlobo - amathuba osomahlaya kanye jokers
Maria Kulikova. Biography of actress
Amayunithi Vintage: ohlwini. Vintage amayunithi wobude
Indlela ukuphuma imodi ephephile-Windows 7. Ikhubaza Mode Okuphephile e-Windows 7
Melissa Dzhoan Hart: Ikhaya uyathakatha 90
Village Holiday "Serebryany Bor» (Krasnoturansk): incazelo kanye nokubuyekezwa
Igama elithi "umxhwele": kusho ukuthini nokuthi esikudlayo ke?
228, Kuyini lokhu inombolo?